Ny vakiteny andro hafa asabotsy 07 aprily 2018 alahady 08 aprily 2018 alatsinainy 09 aprily 2018 talata 10 aprily 2018 alarobia 11 aprily 2018 alakamisy 12 aprily 2018 zoma 13 aprily 2018 asabotsy 14 aprily 2018 alahady 15 aprily 2018 alatsinainy 16 aprily 2018 talata 17 aprily 2018 alarobia 18 aprily 2018 alakamisy 19 aprily 2018 zoma 20 aprily 2018 asabotsy 21 aprily 2018 alahady 22 aprily 2018 alatsinainy 23 aprily 2018 talata 24 aprily 2018 alarobia 25 aprily 2018 alakamisy 26 aprily 2018 zoma 27 aprily 2018 asabotsy 28 aprily 2018 alahady 29 aprily 2018 alatsinainy 30 aprily 2018 talata 01 mey 2018 alarobia 02 mey 2018 alakamisy 03 mey 2018 zoma 04 mey 2018 asabotsy 05 mey 2018 alahady 06 mey 2018 alatsinainy 07 mey 2018 talata 08 mey 2018 alarobia 09 mey 2018 alakamisy 10 mey 2018 zoma 11 mey 2018 asabotsy 12 mey 2018 alahady 13 mey 2018
Ny Asan'ny Apostoly 6,8-15.
Ary feno fahasoavana sy herim-po Etiena, ka nanao fahagagana sy famantarana lehibe tao amin'ny vahoaka.
Fa ny sasany avy amin'ny sinagogan'ny Libertina, sy ny an'ny Sireneana sy ny Aleksandrina mbamin'ny Jody avy any Silisia sy Asia, dia nitsangana niady hevitra tamin'i Etiena,
ka nony tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny Fanahy izay nitenenany izy ireo,
dia namoky olona hilaza hoe: Renay nandefa teny fitenenan-dratsy an'i Moizy sy Andriamanitra izy io.
Nomeny fo koa ny vahoaka sy ny loholona ary ny mpanora-dalàna, ka niantoraka tamin'i Etiena sy nisambotra azy, ary nitondra azy tany amin'ny Sanedrina.
Dia nanangana vavolombelona tsy marina izy nanao hoe: Io lehilahy io tsy mitsahatra miteny ratsy ny fitoerana masina sy ny Lalàna.
Efa renay nilaza izy fa ilay Jesoa avy any Nazareta, hono, dia handrava ity fitoerana ity, sy hanova ny fanao nomen'i Moizy antsika.
Ary raha nibanjina an'i Etiena ry zareo rehetra nipetraka tao amin'ny Sanedrina, dia hoatra ny anjely no fijeriny ny tarehiny.
Na dia mipetraka aza ny mpanapaka sy miteny mamely ahy,
mbola hisaintsaina ny lalànao ihany ny mpanomponao.
Eny, ny fampianaranao no fahafinaretako,
izy no olona mpanolo-tsaina ahy.
Naposako anao ny làlako, dia hoy ny navalinao ahy:
Ampianaro ny lalànao aho.
Ampahafantaro ahy ny làlan'ny didinao,
dia hisaintsaina ny fahagagana ataonao aho.
Halaviro ny làlan'ny lainga aho,
fa omeo ahy ny soa ao amin'ny lalànao.
Nifidy ny làlan'ny fahamarinana aho,
ataoko eo imasoko ny didinao.
Evanjely Masin'i Jesoa kristy Nosoratan'i Md. Joany 6,22-29.
Nony ampitso, tsaroan'ny vahoaka izay nijanona teny an-dafin'ny ranomasina fa tsy nisy afatsy sambo kely anankiray no teo, ary Jesoa tsy niara-niondrana an-tsambo tamin'ny mpianany, fa ny mpianany ihany no nandeha;
nefa nisy sambo kely hafa maro avy any Tiberiady tonga tao akaikin'ny tany nanomezan'ny Tompo mofo hohaniny rahefa nisaotra izy.
Dia niondrana tamin'ireo sambo ireo izy nony nahita fa tsy teo Jesoa na ny mpianany, ka nankany Kafarnaoma hitady an'i Jesoa.
Ary rahefa hitany teny an-dafin'ny ranomasina izy, dia nilazany hoe: Raby, oviana no tonga teto hianao?
Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Lazaiko marina dia marina aminareo: Hianareo no mitady ahy dia tsy noho ny nahitanareo fahagagana, fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky.
Miasà hianareo, tsy mba hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay, dia izay homen'ny Zanak'olona anareo; fa izy no nasian'Andriamanitra Ray tombo-kase.
Ary hoy izy ireo taminy: Inona àry no hataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra?
Namaly Jesoa ka nanao tamin'izy ireo hoe: Izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinoanareo ilay nirahiny.